ဟဒီးဆ်: မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများအနက် အီမာန် ယုံကြည်မှုအားဖြင့် အပြည့်ဝဆုံးသူမှာ ကိုယ်ကျင့်တရား အကောင်းဆုံးသူပင်ဖြစ်သည်။ သင်တို့အနက် အကောင်းဆုံးသူမှာ မိမိဇနီးမယားအပေါ် အကောင်းဆုံးသူပင် ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများအနက် အီမာန် ယုံကြည်မှုအားဖြင့် အပြည့်ဝဆုံးသူမှာ ကိုယ်ကျင့်တရား အကောင်းဆုံးသူပင်ဖြစ်သည်။ သင်တို့အနက် အကောင်းဆုံးသူမှာ မိမိဇနီးမယားအပေါ် အကောင်းဆုံးသူပင် ဖြစ်သည်။
[حسن] - [رواه أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد]
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများအနက် အီမာန် ယုံကြည်မှုအားဖြင့် အပြည့်ဝဆုံးသူမှာ ကိုယ်ကျင့်တရား အကောင်းဆုံးသူပင်ဖြစ်သည်။ သင်တို့အနက် အကောင်းဆုံးသူမှာ မိမိဇနီးမယားအပေါ် အကောင်းဆုံးသူပင် ဖြစ်သည်။
မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများအနက် အဆင့်အတန်း အမြင့်မားဆုံးသူမှာကိုယ်ကျင့်တရားအကောင်းဆုံး သူပင်ဖြစ်ပြီး၊ လူတို့အနက် ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရန် အထိုက်တန်ဆုံးသူမှာ ဇနီးမယားပင်ဖြစ်သည်။ သို့သာမက မိမိ၏ဇနီးမယားနှင့် ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံသူသာလျှင် လူတို့အနက် အကောင်းဆုံးကိုယ်ကျင့်တရားရှိသူဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဗီယက်နမ် ဆင်ဟာလီ ဝီဂါ ကာ့ဒ် ဟောက်ဆာ ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ် ထိုင်း
အီမာန် သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကြား ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိ၏။
အစ္စလာမ် သာသနာတော်၌ ကောင်းမြတ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရား၏ မြင့်မြတ်မှုကို တင်ပြထားသည်။
အီမာန်သည် အဆင့်အတန်းအားဖြင့် ကွဲပြားမှုရှိသည်။ အီမာန်သည် အတိုး၊အလျော့ရှိပြီး တသတ်မှတ်တည်း မဟုတ်ပေ။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . မိသားစုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ထိမ်းမြားခြင်း။ . ဇနီးမောင်နှံကြား ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး။ .
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी Tiếng Việt සිංහල ئۇيغۇرچە كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ் ไทย
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဗီယက်နမ် +ဆင်ဟာလီ +ဝီဂါ +ကာ့ဒ် +ဟောက်ဆာ +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ် +ထိုင်း